14th DUSKIN Leadership Trainee Uploaded by milionlineradio at Your Listen
14th DUSKIN Leadership Trainee
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."မြန်မာ့အသံ ရေဒ ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - 14th DUSKIN Leadership Trainee
မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို နားဆင်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များ မင်္ဂလာပါရှင် …..
ဒီအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က တင်ဆက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ (မနွေးဇာခြည်စိုး)
သောတရှင်များခင်ဗျာ ….. ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ ခေါင်းဆောင်မှု မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း တက်ရောက်ဖို့ရန် ခေတ္တ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မစိုးမိုးဦးကို အင်တာနက်အွန်လိုင်း Skype မှတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ကောက်နှုတ် တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မစိုးမိုးဦးဟာ မသန်စွမ်းသူဘ၀ကို ရောက်ရှိလာပေမယ့် ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပညာတော်သင် သွားရောက်ဖို့ ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နားသောတ ဆင်ကြပါ။ (ကိုအောင်ကိုမြင့်)
မေး။	။ မင်္ဂလာပါ ညီမလေး။
ဖြေ။	။ ဟုတ်ကဲ့….. မင်္ဂလာပါ။
မေး။	။ပထမဦးဆုံး ညီမလေးရဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးပါဦး .....
ဖြေ။	။ဟုတ်ကဲ့ရှင့် …. သမီးနည်မည်က စိုးမိုးဦးပါ … သမီးရဲ့ဇာတိကတော့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိကျောင်းရဲမြို့နယ်၊ စစ်ကိုးပင်ကျေးရွာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သမီးရဲ့ ပညာအရည်အချင်း ကတော့ BSC.Physicsနဲ့ မကွေးတက္ကသိုလ်ကနေ ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာ ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်ရှင့် …. အသက်ကတော့၂၆နှစ်ပါ၊ မသန်စွမ်းမှု အမျိုးအစားကတော့ ပိုလီယိုပါရှင့်။ မိသားစုကတော့ အဖေရယ်၊ အမေရယ်၊ ညီမလေးရယ်၊ (၄)ယောက်ရှိပါတယ်ရှင့်။
မေး။	။ အခု မစိုးမိုးဦးက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပညာတော်သင်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ် .... အခုလို ဂျပန်နိုင်ငံထိ လာရောက်ပညာသင်ယူဖြစ်ခဲ့ပုံကို သိပါရစေ .....
ဖြေ။ ။ဟုတ်ကဲ့ … အခုလိုတက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့တာကတော့ သမီးအသက် ၂၀အရွယ် ရောက်တဲ့တိုင်အောင် မသန်စွမ်းမှုဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ပါဘူးရှင့်၊ သူငယ်ချင်းတွေက ဘွဲ့ရလို့ အလုပ်ကိုယ်စီလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အများနည်းတူ … ဆရာဖြစ်သင်တန်းတွေ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်တွေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လျှောက်ထားခဲ့ပေမယ့်လည်း သမီးက မသန်စွမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် မသန်စွမ်းမှုကို အကြောင်းပြုပြီး ရွေးချယ်ခြင်း မခံခဲ့ရပါဘူးရှင့် …. အဖေအမေရဲ့ လယ်ကထွက်တဲ့အသီးအနှံတွေကို ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်ပေးရတာနဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ အချိန်ကုန်နေခဲ့တာပေါ့နော် … အရမ်းစိတ်ဓါတ်ကျခဲ့ရတဲ့ အချိန်ပေါ့ … အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ AARမသန်စွမ်းသူများ သက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်ကျောင်းမှာ စက်ချုပ်ပညာကို လေ့လာဆီးပူးခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီမှာဘ၀တူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့တွေ့ပြီး မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းကို စတင်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်ရှင့် … အဲဒီသင်တန်းမှာ သမီးဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ် … သင်တန်းကပြီးလို့ ပြန်သွားပေမယ့်လည်း ဆရာမနဲ့က အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့နော် …. ဆရာမကိုယ်တိုင်လည်း မသန်စွမ်းဖြစ်ပြီး မသန်စွမ်းကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတော့ ဒီလိုပဲ အကြံဥာဏ်တွေပေးရင်းနဲ့ မသန်စွမ်းလောကထဲကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ……. အခုလည်းဆရာမက ဒီDUSKINသင်တန်းကိုရော ကြိုးစားကြည့်ပါလားဆိုတာနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ရင်းနဲ့ တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့တာပါရှင့်။
မေး။	။လက်ရှိဆည်းပူးနေတဲ့ ပညာရပ်တွေအကြောင်းလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ။	။ဟုတ်ကဲ့ ….. အခုသမီး လက်ရှိဆည်းပူးနေတဲ့ပညာရပ်တွေကတော့
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ မသန်စွမ်းသူများ ဥပဒေ၊ -မသန်စွမ်းသူတွေ သွားလာမှု လွယ်ကူစေရန်အတွက် စီမံထားရှိတဲ့ အတားအဆီး ကင်းမဲ့ဇုန် Barrier Free တွေပေါ့နော်၊ မသန်စွမ်းသူများ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ဘ ၀ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အတွက် Independent Living Centerတွေ၊
တောရွာလေးတွေမှာ မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်း တွေကို ဘယ်လိုစဖွဲ့မလဲ ဆိုတာတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုစီမံအုပ်ချုပ်မလဲ ဆိုတာတွေပေါ့နော် အစရှိသဖြင့် မသန်စွမ်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ အားလုံးနဲ့ အချို့အပိုင်းတွေကတော့သင်ဆရာဆိုတာ မရှိပေမယ့်လည်း မြင်ဆရာ … ကြားဆရာနဲ့ပဲ ….. တွေ့တွေ့သမျှ ပညာအားလုံးကို လေ့လာနေပါတယ်ရှင့်။
မေး။	။ဟုတ်ပါပြီ ….. ညီမလေးနဲ့အတူ လာရောက်ပညာဆည်းပူးနေတဲ့ သူတွေက ဘယ်နိုင်ငံတွေကလဲ ဆိုတာလည်း သိပါရစေ .... သူတို့နဲ့အတူ ညီမလေး ပညာဆည်းပူးရတဲ့ အတွေ့အကြုံ (ဒါမှမဟုတ်) ခံစားချက်လေးကိုလည်း ပြောပြပါဦး .....
ဖြေ။	။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့် …. သမီနဲ့အတူတူ သင်တန်းသား အားလုံးပေါင်း သမီးအပါအ၀င် (၇) ယောက်ရှိပါတယ်ရှင့် …. ထိုင်ဝမ်က အမျိုးသားရယ်၊ နီပေါလ်က အမျိုးသမီးရယ်၊ သမီးရယ်ကတော့ ၀ှီးချဲလ် အသုံးပြုသူပေါ့နော်။ ကမ္ဘောဒီးယားက အမျိုးသမီးရယ်၊ မလေးရှားက အမျိုးသားရယ်က အမြင်အာရုံ အားနည်းတဲ့သူ၊ ဖိလစ်ပိုင်က အမျိုးသားရယ်၊ မော်လဒီဘူက အမျိုးသားရယ် ၂ ယောက်ကတော့ အကြားအာရုံ အားနည်းတဲ့သူ၊ အားလုံးပေါင်း ၇ ယောက်ပါရှင့်။ ဟုတ် …. သူတို့နဲ့အတူ လေ့လာဆည်းပူးခွင့် ရတဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လေ့လာခွင့်ရတဲ့ အသိပညာသာမကပဲ သူတို့အားလုံးရဲ့ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကိုပါ လေ့လာခွင့်ရရှိပါတယ်ရှင့် …..
မေး	။အခုလို ဂျပန်မှာ ပညာဆည်းပူးပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်လာမယ့် အခါမှာလည်း ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမယ့် အစီအစဉ်တွေရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါ ......
ဖြေ။	။ဟုတ်ကဲ့ရှင့် …. သမီးဂျပန်ကို မရောက်ခင်ကတော့ မြန်မာပြည်က မသန်စွမ်းတွေ အားလုံးအတွက် ဆိုပြီးတော့ပဲ စဉ်းစားခဲ့တာပေါ့နော် …. အခုဂျပန်မှာ သမီးပညာသင်ရတာ နေဖို့စားဖို့ လုံးဝပူစရာမလိုဘဲ ပညာသင်ကြားခွင့် ရခဲ့တာပါ … အဲဒါတောင်မှ ဒီအချိန်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကလူတွေ ဘာတွေလုပ်နေကြပြီ ….. ဒီအချိန်ဆိုရင် အိမ်ကလူတွေ ထမနဲ တွေစားနေကြပြီ … ဒီအချိန်ဆိုရင် သင်္ကြန်ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်က နေရာတိုင်းမှာ ပျော်စရာကောင်းနေပြီ အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော် … အမြဲသတိရနေမိပါတယ် …. ဒီမှာအလုပ်လုပ်ချင်ရင် အခွင့်အရေးဆိုတာ ရှိနေပေမယ့် နည်းနည်းမှ စိတ်မ၀င်စားဘူး …. သင်တန်းပြီးရင် မြန်မာပြည်ကိုပဲ ပြန်ချင်တယ် …. အဲဒီလိုပဲ အခြားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေလည်း မြန်မာပြည်မှာသာ အဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာပဲ ပြန်ပြီးနေချင်ကြမယ် ဆိုတာသေချာပါတယ် …. သူတို့တွေနဲ့ စကားတွေ ပြောဖြစ်နေတော့ ခံစားချက်တွေကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ် … သူများနိုင်ငံသားတွေ အဆင့်အတန်း မြင့်မြင့်လေးနဲ့ နေတာထိုင်တာတွေ့တော့ သမီးကလည်း သမီးနိုင်ငံက လူတွေကိုလည်း ဒီလိုဘ၀မျိုးရစေချင်တယ် …. သမီးရဲ့ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်က မသန်စွမ်းတွေအားလုံး အပြင် မြန်မာပြည်သားတွေ အားလုံးရဲ့ လူနေမှုဘ၀ ပူပန်ကြောင့်ကြမှုမရှိဘဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါရှင့်။
မေး	။ ညီမလေးအနေနဲ့ မသန်စွမ်းသူ မြန်မာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အခုလို တိုင်းတစ်ပါးမှာ လာရောက် ပညာဆည်းပူးခွင့် ရတဲ့အတွက် ရင်ထဲက စကားသံလေးလည်း သိပါရစေ .....
ဖြေ။	။ဟုတ်ကဲ့….ဒီအခွင့်အရေးက သမီးဘ၀မှာ ဘယ်တုန်းကမှ မျှော်လင့် မထားတဲ့အရာပါ … ပြီးတော့ သမီးတို့အခု သင်တန်းသား (၇)ယောက်က အာရှဖစိတ်ဖိတ်ဒေသ တစ်ခုလုံးရဲ့ သင်တန်းသားပေါင်း (၂၅၀) ကျော်ထဲကနေ အရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်ရှင့် .... သမီးအခုလို ပညာဆည်းပူးခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် သမီးထက် သမီးရဲ့ အမေနဲ့အဖေက ပိုပြီးပျော်တယ် …. အထူးသဖြင့် သမီးကရွာမှာနေတဲ့ မသန်စွမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ ပိုပြီးပျော်တာပေါ့နော် … ပထမတော့ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ….. အစားအသောက်က အစ … ဘာသာစကားက အစပေါ့နော် …. နောက်ပိုင်းတော့ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် …. ဘယ်နေရာကိုသွားသွား တစ်ယောက်တည်း သွားရတယ် ….. လေ့လာရတဲ့ နေရာတိုင်းရဲ့ အကြီးဆုံး ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အရေးပေးမှုကိုခံရတယ် …. သမီးကိုယ်သမီးလည်း အရင်ကထက်ပိုပြီး ယုံကြည်မှုတွေ ရှိလာတယ် …… အရင်ကဆိုရင် ငါလုပ်နိုင်ပ့ါမလားဆိုတဲ့ အတွေးကခေါင်းထဲမှာ အမြဲရှိနေခဲ့တာ …. အခုတော့ … ဘယ်အရာမဆို ငါလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ချက် ရှိလာပါတယ် … အဲဒီအတွက်လည်း သမီးကိုယ်သမီး အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်ရှင့် ……
မေး။	။ဟုတ်ပါပြီ …… ဒီ DUSKIN ပညာတော်သင်ခွင့် ရတဲ့ထဲမှာ ညီမလေးက ဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်လဲ .... ရှေ့က စီနီယာတွေရှိရင်လည်း မိတ်ဆက်ပေးပါဦး .....
ဒီ DUSKIN သင်တန်းက အခုက (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပါရှင့် …. ပထမ တစ်ယောက်ကတော့ မမေခန့်ချစ်ခင် …. အမြင်အာရုံအားနည်းတဲ့သူပေါ့နော် …. သူကတော့ သင်တန်းရဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ်မြောက်မှာ တက်ခွင့်ရခဲ့တာပါရှင့် …. ဒုတိယ တစ်ယောက်ကတော့ ဦးအောင်ကိုမြင့် …. အမြင်အာရုံ အားနည်းတဲ့သူပေါ့နော် …. (၂) ကြိမ်မြောက်မှာ တက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ …. တတိယ တစ်ယောက်ကတော့ ဦးနေလင်းစိုး …. ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းပါရှင့် …. (၇) ကြိမ်မြောက်မှာ တက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ …. စတုတ္ထ တစ်ယောက်ကတော့ မအေးသဉ္ဇာထွန်း …. သူကတော့ အကြားအာရုံ အားနည်းတဲ့သူပါရှင့် …. သူကတော့ (၁၂) ကြိမ်မြောက်မှာ တက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ ….. ပဉ္စမမြောက်ကတော့ သမီးပေါ့နော် …. သမီးကတော့ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်း …. (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပါရှင့် …..
မေး	။ညီမလေးအနေနဲ့ ယနေ့ခတ် လူငယ်တွေကို ဘယ်လို သတင်းစကားလေးများ ပေးချင်ပါသလဲ ……
ဖြေ။	။ဟုတ်ကဲ့ရှင့် …… သမီးအနေနဲ့ ငုတ်မိသဲတိုင်တက်နိုင်ဖျားရောက် ဆိုတဲ့စကားပုံ အတိုင်းပေါ့နော်….. ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ကြိုးစားကြပါလို့ …. အချိန်မြန်တာနဲ့ နှေးတာပဲကွာမယ် …. တစ်နေ့တော့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ရလဒ်အနေတဲ့ …. အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်ကို ခံစားရမှာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ……
မေး	။ဘ၀တူ မသန်စွမ်း ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကိုလည်း အားပေးစကား ပြောပေးပါဦး ညီမလေး ....
ဖြေ။	။ဟုတ်ကဲ့ … မြန်မာပြည်က မသန်စွမ်းညီအစ်ကို မောင်နှမတွေအားလုံးကို …. အားပေးစကား ဆိုတာထက် … အားဆိုတာကို အတူတူ ဖော်ဆောင်ကြရအောင်လို့ ပြောချင်ပါတယ် …… လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အရည်အချင်းဆိုတာ ရှိပါတယ် ….. ငါကတော့ရွာမှာနေရလို့ … ငါကတော့ဘွဲ့မှမရလို့ ငါကတော့ ကျောင်းစာမှ မသင်ခဲ့ရတာစတဲ့ အားငယ်စရာတွေကို တွေးနေမယ့်အစား ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကိုပဲတွေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူပါလို့ .…. ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ် …... အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ သမီးရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည်ဝဖို့အတွက် အားတွေလိုပါတယ်လို့ ..… အားလုံးရဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ အတူတူ ကြိုးစားကြရအောင်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး	။အခုလို ပညာသင်ရင်း မအားလပ်တဲ့ကြားက အချိန်ပေး ဖြေဆိုပေးတဲ့အတွက် ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က မစိုးမိုးဦးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....
ဖြေ။	။ဟုတ်ကဲ့ … သမီးကလည်း အခုလိုဖြေကြားခွင့် ရတဲ့အတွက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးတဲ့ MILI Online Radio ကိုလည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် ….. ပြီးတော့သမီးကို တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရတဲ့အထိ နေပူမရှောင်၊ မိုးရွာမရှောင် နွံထဲဗွက်ထဲကနေ ကျောပိုး၊ ကျောင်းသွား၊ ကျောင်းပြန် အကြိုအပို့လုပ်ပြီး ပညာသင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ သမီးအမေကြီးနဲ့ အဖေကြီး၊ အမေ၊ အဖေ၊ သမီးညီမလေးနဲ့ ဦးလေးတွေအားလုံး ….. ပြီးတော့ ကလေးဘ၀ကနေ အခုချိန်ထိ သင်ကြား ပြသပေးခဲ့ကြတဲ့ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ အားလုံးကို ဂျပန်ပြည်ကနေ ရိုသေလေးမြတ်စွာ ဂါရ၀ပြုပါတယ်လို့ ….. ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
(မေး - မနွေးဇာခြည်စိုး၊ ဖြေ - မစိုးမိုးဦး)